Qarax iyo toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho. | Universal Somali TV
Qarax iyo toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho.
Qarax Miino ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhawac oo soo gaaray dad Shacab ah iyo askar.
Qaraxa waxa uu si gaar ah uga dhacay afaafka hore ee xero Shiino oo u dhow Xeradii hore ee Shiirkole, wuxuuna ahaa Miinada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fog fog laga hago, sidaas waxaa sheegay Saraakiil Ciidan.
Inta la ogyahay qaraxa waxaa ku geeriyooday laba qof oo dhalinyaro ah, halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale, dadka dhaawcamay mid kamid ah waxaa la sheegay inuu yahay askari katirsan Ciidamada dowladda oo ka agdhawaa goobta qaraxa ka dhacay.
Si akstaba, lama oga qaraxa cida lala damacsanaa, iyadoo jugtiisa laga maqlay xaafado badan oo kamid ah degmooyinka Hodan iyo Deyniile.
Dhinaca kalena, Koox bistoolado ku hubeysan ayaa goordhow meel ku dhaw Saldhiga Boliska degmada Kaaraan ku dilay Qof Shacab ahaa oo Magaciisa lagu soo koobay Daashoow, iyadoo dilka kadibna ay goobta isaga carareen.
Kan-xigaMadaxweynaha Somaliya oo Saraakiisha ...
Kan-horeDuqa Muqdisho oo la kulmay Kusimaha M...
46,614,136 unique visits